Ciidamadii ugu badnaa oo Gonder gaadhay iyo qax kabilawday & Maraykanka oo muwaadiniintooda ku amaratay inay Ethiopia isaga baxaan. | Voice Of Somalia
Magaalada Gonder ee Gobolka Axmaarada ayaa lagu soo waramayaa inuu Qax balaadhan kasocda kadib markii Kumanaan ciidamada maamulku Woyanaha ahi ay buux dhaafiyeen Hareeraha magaalada.
Ciidamada ku Qulqulaya magaalada Gonder ayaa waxaa saacidaya diyaaradaha dagaalka oo Hawada magaaladaasi dul Heehaabaya, waxayna cabsidi ugu xooganayd soo food saartay dadka shacabka ah ee kudhaqan magaalada iyo nawaaxigeeda, kuwaasi oo dantu ku khasabtay inay magaalada isaga Barakacaan.
Ciidamada Kooxaha mucaaradka ah ee magaalada Qabsaday ayaa iyaguna dhankooda difaac adag uga Jira Hareeraha iyo Gudaha magaalada, iyaga oo doonaya inay ciidanka Woyanaha kula dhex dagaalamaan Gudaha magaalada.
Wararkii ugu dambeeyay ee kasoo baxaya magaalada ayaa sheegaya in saacad kaste uu magaalada dagaal kaqarxi karo, maadaama Labada ciidan is Horfadhiyaan Qolo walibana diyaar u tahay dagaal lagu kala baxo.
Safaarada Maraykanka ee magaalada Addis ababa ayaa digniin adag kasoo saartay xaalada murugsan ee kataagan wadanka Itobiya oo ay kutilmaanatay inay Gaaray Heerkii ugu xumaa.
War Qoraala oo safaaradu soo dhigtay bogeeda Twitterka ayay ugu baaqday dhamaan muwaadiniinta Americanka ah ee kusugan dalkaasi inay sida ugu dhakhsaha badan uga baxaan dalka Itobiya.
“Waxaan lasocodsiinaynaa muwaadiniinteena kusugan Gudaha Itobiya inaysan jirin xiligan damaana qaad amaan oo laysku halayn karo, sidaa awgeed waxaan kula talinaynaa muwaadiniinta aanay Ahmiyad u lahayn Joogista wadankan inuu isaga baxo inta xaaladu iska badalayso” ayaa lagu yidhi warka kasoo baxay safaarada magaalada Addis ababa ee Maraykanka.
Safaarada ayaa sidoo kale xubnaha muhiimka ah ugu baaqday inay xogtooda si Joogta ah ula soo socodsiiyaan safaarada si loo caawiyo hadii ay khatar lama filaan ahi timaado.
Warkani kasoo baxay safaarada Maraykanka ayaa ah kii ugu Horeeyay ee muujinaya Heerka ay gaarsiisan tahay Khatarta amaan ee kajirta dalka Itobiya oo Todobaadyadii ugu dambeeyay ay kasocdeen iska Hor imaadyo u dhexeeya Kacdoon wadayaal Oroma ah iyo ciidamada amaanka Itobiya.
Voice Of Somalia-SOMALIA LEKAS